Na agbanyeghị etu netwọkụ gị buru ibu, o yiri ka ọ nweghị mgbe ị nwere ezigbo kọntaktị. Karịsịa mgbe gị na nnukwu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ. Ebe nchekwa data akpọtụrụ na-adịkarị nke oge - ọkachasị ebe azụmaahịa nwere nnukwu ọrụ ọrụ. Ikike inyocha ozi kọntaktị n’oge na-esite na isi mmalite siri ike dị mkpa maka mbọ ị na-agba n’ọdịnihu. Aeroleads bụ ọrụ nwere ihe mgbakwunye Plugin na-eso ya nke na-enyere ndị ahịa gị aka
Mgbe ụfọdụ ọ na -adị mfe ịgbaso akara ntụpọ dịka ị na-achọ iji hụ na ahịa dijitalụ gị ziri ezi ma zuo ezu. Ihe omuma ihe omuma a, ekele nke abuo ndi ozo, choro ime nke a. Na-eje ije gị site n'okporo ụzọ ahịa nke ọnụnọ weebụ gị, mkpanaka, ecommerce, ọpụpụ, inbound, ọdịnaya na mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta. Otu ihe dị na infographic a bụ ikike maka atụmatụ niile iji rụọ ọrụ na ibe ha. Dị ka ọmụmaatụ, tinye n'ọrụ gị